Ababhali abakhulu be-4 kaJulayi 26 Shaw, Machado, Huxley kunye neMatute | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | into engeyonyani yebuchwepheshe, Ababhali, I fantasy, Inoveli, Imibongo, Ithiyetha
Akukho ntsuku zininzi kwikhalenda apho kufuneka ubhiyozele iminyaka emininzi yokuzalwa kwababhali. Kodwa 26 ngoJulayi Inye. Namhlanje babelana ngemihla yokuzalwa Ababhali abane ababalaseleyo, iIreland, iNgesi kunye neSpanish ezimbini, ezingaphezulu kwemisebenzi eqaqambileyo neyaziwayo. Bango-GUGeorge Bernard Shaw, u-Aldous Huxley Antonio Machado kunye no-Ana María Matute. Kwimemori yakhe ndikhetha ezinye amabinzana kunye nemisebenzi yakhe ukubakhumbula.
1 26 ngoJulayi
1.2 U-Antonio Machado
1.2.1 Kwi-elm eyomileyo
1.4 UAna Maria Matute
UShaw wazalelwa ngaphakathi Ireland en 1856. Nguye kuphela umbhali ophumelele Ibhaso likaNobel kuNcwadi ngo-1925 kunye UOscar weFilimu Academy Esona sikripthi silungileyo se Pygmalion e 1938.
Ubomi abukho ngokuzifumana. Ubomi buzama ukuzidala.
Sifunda kumava ukuba amadoda awaze afunde nto kumava.
Ubutsha buchithelwa ulutsha.
Inkululeko ithetha uxanduva. Yiyo loo nto uninzi lwabantu luyoyika.
Indoda ayiyeki ukudlala kuba iyaguga. Uyaguga kuba uyeka ukudlala.
UAntonio Machado wazalwa ngoJulayi 26, 1875 en Sevilla. Ngawona malungu abamele umnxeba Isizukulwana se-98, Umsebenzi wakhe yenye yezona zaziwayo nezaziwayo. Ngaphezulu kwelifa elikhulu leendinyana ezingenakonakala, imisebenzi yakhe ibonakala Ubunzima o Iindawo zeCastile.
Ndikhethe lo mbongo ingakumbi kuba uyinxalenye inkumbulo yam yokuqala yesihobe. Kwindlu yelizwe lotatomkhulu wam a isikhumba kwisakhelo somthi. Ndingayifunda ndiyiphindaphinde kwaye emva koko ndijongise umdla kwi-elms egadini ngaphandle, kwaye bendonwabile ukuba akukho namnye owomileyo.
Kwi-elm yakudala, yahlulwe ngumbane
nakwisiqingatha sayo esibolileyo,
ngeemvula zika-Epreli kunye nelanga likaCanzibe
amanye amagqabi aluhlaza aphume.
Ikhulu leminyaka elm kwinduli
ekhotha iDuero! Ubulembu obutyheli
ibala ixolo elimhlophe
esiqwini somthi obolileyo nothuli.
Ayizukubakho, njenge poplar pop
abagcina indlela nonxweme,
kuhlala ii-nightingles ezimdaka.
Umkhosi weembovane zilandelelana
iyenyuka ngayo, nangaphakathi ezibilinini zayo
izigcawu ziluka iiweb zazo ezingwevu.
Ngaphambi kokuba ndikubethe, Duero elm,
Ngentsimbi yakhe umnyuki womthi, nomchweli
Ndikuguqula ube yintsimbi,
iincakuba zenqwelo okanye inqwelo;
ngaphambi kobomvu ekhaya, ngomso,
ukutshisa kwindlu encinci,
Phambi kokuba uqhwithela lukuhlise
Wanqumla ukuphefumla kweentaba ezimhlophe;
Phambi kokuba umlambo ukutyhalele elwandle
elm, ndifuna ukuqaphela kwipotifoliyo yam
ubabalo lwesebe lakho eliluhlaza.
Intliziyo yam iyalinda
kananjalo, ekukhanyeni nasekukhanyeni ebomini,
omnye ummangaliso wentwasahlobo.
UHuxley wazalelwa e 1894, eSurrey, kusapho olunesiko elibalulekileyo lezengqondo. Wafunda e-Eton kwaye, nangona wayebandezeleka esemncinci kakhulu ukugula kakhulu Oko kumshiye eyimfama kangangeenyanga ezili-18, ukwazile ukubuyela kwimeko yesiqhelo, kodwa endaweni yokufunda amayeza wagqibela ngokuthweswa isidanga Uncwadi lwesiNgesi. Wabhala incwadi yokuqala malunga namava akhe okufumana umbono kwakhona, Ubugcisa bokubona.
Kodwa ngokungathandabuzekiyo umsebenzi wakhe omkhulu kwaye onempembelelo owaziwayo kwihlabathi liphela yi-dystopia Umhlaba owonwabileyo, yabhalwa ngeenyanga ezi-4 ngo-1932 ikamva kunye nethemba lokujonga ilizwe, apho ibonisa khona uluntu olulawulwa yimeko yengqondo nalapho into ebizwa ngokuba soma isetyenziselwa iinjongo zolawulo.
IPalamente, ucinga ukuba uyazi ukuba yayiyintoni, yapasisa umthetho owalelayo. Iifayile zigciniwe. Kwakukho iintetho malunga nenkululeko, malunga nayo. Inkululeko yokwazi kunye nokudakumba. Inkululeko yokuba sisikhonkwane esingqukuva kumngxunya wesikwere.
Ulonwabo lokwenene luhlala lubonakala ngathi aluthelekiswa nembuyekezo efunyanwa lusizi. Kwaye, ewe, uzinzo alukhange lubenomtsalane njengokungazinzi. Kwaye ukoneliseka yiyo yonke into awunalo upelo lomlo olungileyo ochasene nelishwa, okanye ubumnandi bokulwa nesilingo okanye ngokuchasene nomnqweno obulalayo okanye ukuthandabuza. Ulonwabo alusoze lukhulu.
Imeko yokufa iqala kwiinyanga ezilishumi elinesibhozo. Wonke umntwana uchitha iintsasa ezimbini veki nganye kwiSibhedlele sokufa. Kwezi zibhedlele bafumana ezona zinto zokudlala zilungileyo, kwaye banikwa i-ice cream yetshokholethi ngeentsuku zokufa. Ngaloo ndlela bafunda ukwamkela ukufa njengento eqhelekileyo.
Kwagqitywa kwelokuba kupheliswe uthando lweNdalo, ubuncinci phakathi kwabaphantsi; Ukuphelisa uthando lweNdalo, kodwa hayi utyekelo lokusebenzisa ukuthuthwa. Kuba, ewe, kwakubalulekile ukuba baqhubeke nokufuna ukuya elizweni, nokuba bayakucaphukela. Ingxaki yayikukufumana isizathu esinamandla ngakumbi soqoqosho sokusebenzisa uthutho kunokuthanda nje ii-primroses kunye nomhlaba. Kwaye bayifumana.
Kodwa andifuni ntuthuzelo. Ndifuna uThixo, ndifuna imibongo, ndifuna umngcipheko wokwenene, ndifuna inkululeko, ndifuna ukulunga. Ndifuna isono.
UAna Maria Matute
UAna María Matute wazalelwa e 1926 kwaye ungomnye wababhali abadumileyo baseSpain. Ibiyi ilungu leRoyal Spanish Academy kwaye wabhala zombini iinoveli zabantu abadala nabantwana. Ophumelele amabhaso amaninzi anje nge Nadal, i Iplanethi, Abagxeki okanye uNcwadi lweLizwe.
Ubuntwana lelona xesha lide ebomini.
ICixixote Yincwadi yokuqala endikhale ngayo, ngokusweleka kukaDon Quixote, ngayo yonke into eyithethayo: Ukuvumela impambano inyamalale. Kubi oko. Uloyiso lwengqondo elungileyo.
Ukubhalela mna ayingobuchwephesha, nkqu nobizo. Yindlela yokuba sehlabathini, ukuba seko, awunakwenza ngenye indlela. Ungumbhali. Kulungile okanye kubi, lowo ngomnye umbuzo.
Andizange ndibuyeke ubuntwana bam, kwaye loo nto ihlawula kakhulu. Ubumsulwa bubunewunewu obungenakufikelela kubo kwaye bafuna ukukuqhwaba uvukile.
Ukuthetha ngento umntu ayibhalayo kufana nokungasebenzi ngebhotile yesiqholo esixabisekileyo: ivumba lomphunga. Kuya kufuneka uyigcine ivaliwe kwaye ubhale, yeyona ilungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Ababhali aba-4 abazalwe ngoJulayi 26. UShaw, uMachado, uHuxley kunye noMatute
UFrancisco Tejedo Torrent, ophumeleleyo kwi-III Carmen Martín Gaite Prize.